Malezia: Manjaka ve ny fanavakavahana – sa ady politika fotsiny izany? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Febroary 2019 3:03 GMT
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana Jolay 2009)
Mieritreritra ny governemantam-panjakana ao Perak ao Malezia raha tokony “handray fepetra” amin'ireo bilaogera roa izay voalaza fa nanevateva ny mpanjaka Perak sy ny fahamasinan'ny finoana silamo tamin'ny alàlan'ny asa sorany vao haingana. Toa nilaza ny Menteri Besar (vaovao), na Lehiben'ny governemanta, Dr Zambry Abdul Kadir fa niteraka disadisa tao anatin'ny fiarahamonina Malay ao amin'ny fanjakana ilay lahatsoratra.
Voalaza fa nilaza toy izao Dr Zambry:
Miharihary fa tsy nahitana fahamendrehana, fanajana sy fahatokisana ny asa soratr'izy ireo. Nampiseho ny tsy firaharahian'izy ireo mihitsy ny mpitondra Malay sy ny Islamo… Nanao fikomiana izy ireo ary angamba fivadihana … tsy manaja ny lalampanorenana sy ny firenena ireo mpanoratra ireo .
Na dia toa nilaza aza izy fa “tsy hamela fotsiny amin'izao ny raharaha ny governemantam-panjakana, dia tsy misy ny antsipiriany momba ny anton'ny hetsika horaisin'izy ireo.
Mandritra izany, nandà ny mpikambana ao amin'ny antoko mpanohitra, Democratic Action Party (DAP), Loke Siew Fook, izay heverina ho iray amin'ireo bilaogera voalaza fa manafintohina fa tsy nanoratra lahatsoratra momba ny fanavakavahana tao amin'ny bilaoginy izy. Noho izany dia toa nampiantrano polisy vao haingana momba izany izy. Hoy izy tao amin'ny bilaoginy:
Te handà mafy aho fa na DAPSY [Tanora Sosialista DAP] na izaho dia tsy namoaka fanambarana manevateva ny finoana islamo na ny mpanjaka. Lainga naparitak'ireo antoko sasany tsy tompon'andraikitra izany mba handotoana ny endriky ny DAP ary niezaka nanoritra ny DAP ho anti-Silamo sy anti-Malay.
Ankoatra izany, nisy filazam-baovao nilaza azy hoe:
Lainga naparitak'ireo antoko sasany tsy tompon'andraikitra izany mba handotoana ny endriky ny DAP. Miezaka manoritra ny DAP ho anti-Silamo sy anti-Malay izy ireo.
Nanambara ny maha tsy manan-tsiny azy koa izy tao amin'ny bilaogy Maleziana malaza, Rocky's Bru. Menavazana ao amin'ny Antoko DAP, Lim Kit Siang, nilaza toy izany tao amin'ny bilaoginy:
Mazava fa anisan'ny drafitra farany indrindra amin'ny paikady henjana avy amin'ny Umno (mpikambana ao amin'ny fiaraha-mitantana) ity mba handotoana ny endrik'ireo mpitarika ny DAP sy ny DAP ho anti-Malay sy anti-Silamo ao anatin'ny tetika politika lehibe handrava sy hamotika ny Pakatan Rakyat ( fikambanan'ny mpanohitra).
Mandritra izany, nitaky fanadihadiana momba ireo “fanambarana mikomy” natao ny praiminisitra, Najib Razak. Misy zavatra mampiahiahy ny bilaogera ve sa ady politika fotsiny izany?